Naghachi Outlook Express Data sitere na Temporary Faịlụ
Home ngwaahịa DataNumen Outlook Express Repair Naghachi Outlook Express Data sitere na Temporary Faịlụ
Mgbe ole Outlook Express compacts a .dbx faịlụ, ọ ga-ike a temporary .dbt faịlụ n'okpuru otu nchekwa dị ka .dbx faịlụ. Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị bụ kọmpat Inbox.dbx faịlụ, mgbe ahụ temporary faịlụ ga-abụ Inbox.dbt.
Mgbe njehie pụtara n'oge kọmpat ọrụ na ịnweghị ike ịnweta folda ozi gị ọzọ, ị gaghị enwe ike iweghachite data chọrọ na faịlụ .dbx, mgbe ahụ ọ ga-ekwe omume ịgbake data gị site na ogerary .dbt faịlụ, dị ka ndị a:
Chọta ebe nchekwa ebe faịlụ .dbx dị.
Lelee ma ọ bụrụ na enwere ogerary .dbt faịlụ n'okpuru otu nchekwa.
Ọ bụrụ ee, buru aha ya na faịlụ ọzọ yana
Iji DataNumen Outlook Express Repair ka i scanomi InboxTemp.dbx faịlụ na-agbake ozi ịntanetị na ya.